Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU-Imkulu oo abaalmarin siiyay ardaydii kaalinta fiican gashay
Ururka OYSU-Imkulu oo abaalmarin siiyay ardaydii kaalinta fiican gashay
Posted by ONA Admin	/ June 15, 2014
Waxaa kulan aad u balaadhan isugu yimid Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogaadenya OYSU faraca xerada qaxootiga ee Imukulu. Kulankaasi oo ahaa mid aad u baladhan ayaa waxaa isku soo dubariday maamulka ardayda Ogaadenya ee ku xerada Imukulu.
Kulanka oo arima muhiim ah oo quseeya dhalinyarada lagaga hadlayay ayaa waxaa ugu horaynab lagu furay wacdi diiniah oo uu soo jeedfiyay gudoomiyaha jaaliyada S.Ogaadenya ee dalka Eretreya halgame Sheekh Maxamed Xasan ( maxamed goday ). Waxaa kulanka daadihinhayay halgame Axmed Cabdi Yuusuf iyo qaban-qaabiyayaashi kale oo isugu jiray maamulka jaaliyada iyo midka ardaydaba. Furitaankii ka dib ayaa Waxaa lagu soo dhaweyay makarafoonka gumomiyaha ururka OYSU halgame Muxyadiin shesekh Cabdi oo ka warbixiyay xaalada halganka, guulaha la gaadhay gudaha iyo dibadaba. Waxaa kaloo uu ka hadlay dhibaatada uu ku hayo gumaysiga shacabka S.Ogaadenya meel kastoo ay joogaanba. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dhalinta waxbaranaysa in dalka Ogaadenya looga bahanyahay. Gumoomiyaha ayaa halkaasi kasoo jeediyay warbixin aad u qiimi badan oo isugu jirtay gubaabo iyo wacyigalin.
Waxaa ka mid ahaa ujeedada kulanka in abaalmarino lagu gudoonsiiyo dhalinyaradii kaalimaha fiican ka gashay waxbarashada iyo arimaha abaabulka ururka, iyadoo ardaydasi goobtaas lagu gudoonsiiyay abaal marino kala gadisan.
Waxaa sidoo kale kulanka kasoo qaybgalay waalidiintii ardaydaasi oo runtii aad ugu faraxsanaa kulanka iyo abaal marinada lasiiyay ardayda.
Waxaa iyana goobtaasi wacdara ka dhigay kooxda Gurmad-qaran oo halkaasi ka qaaday dhantooyin iyo heesa wadani ah. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay walaalaha Somaliyeed ee ku nool wadanka iyo waliba marti shaf kale, waxayna isku raaceen dhamaan bulshadi kulan kaasi ka soo qaybgashay sidii loo xoojin lahaa ababulka iyo taageerida loo hayo haganka ka socda ogaadenya ay hogaaminayso JWXO.